Home Wararka Qaxooti Yamaniyiin ah oo soo gaaray deegaano ka tirsan Puntland
Waxaa magalaada Boosaaso iyo degaano ka tirsan Puntalnd xalay soo gaaray Qaxooti Yemeniyiin ah, oo ay weheliyaan dad Soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo laabtay, kuwaas oo ka soo cararay colaadda ka aloosan waddanka Yemen.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha gudaha dowladda Puntland, ayaa lagu sheegay in dekedda Boosaaso ay xalay soo gaareen, dadkan oo ka kooban Qaxooti Yemeniyiin ah iyo dad Soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo noqday.
Mas’uuliyiinta Puntland ayaa dekedda ku soo dhoweeyay dadkan oo gaaraya 80 Qoys, kuwaas oo u badan Carruur iyo Haween, waxaana loo gudbiyay Xarunta qaabiladda Qaxootiga ee Boosaaso. Muddooyinkii u dambeeyay waxa magaalada Boosaaso ku soo qul-qulayay Qaxooti Yemeniyiin ah iyo dad Soomaaliyeed oo ka soo cararay colaadda ka jirta dalkaasi Yemen.
Previous articleSomalia & Itoobiya oo heshiis cusub kala saxiixday!
Next articleDoorashadii Itoobiya ee dib loo dhigay oo maanta ka dhaceysa dalkaas
Wasiire Cawad sidee uga hadlay Gefkii Labaad ee Ethiopia (Aqriso)